ရခုိုင် | MoeMaKa Burmese News & Media
>student movement 22
ဒီလူည - ခေါက် ရိုးကျိုးမြစ်
လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (20)
Posts Tagged ‘ ရခုိုင် ’
Twitter CEO မြန်မာပြည်တွင် ၀ိပဿနာ ၁၀ ရက်စခန်းဝင်ခဲ့ ဆွေဝင်း/Myanmar Now (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈နာမည်ကျော် အင်တာနက်လှုမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter (တွစ်တာ) ကုမ္ဗဏီရဲ. အလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား...
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၈ ● ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံရေးဆန္ဒ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ကိုအခြေခံပြီး...
စမ်းချောင်းဘိုဘိုနဲ့ ရခိုင်ဒေသရောက် အင်တာဗျူး – Myanmar Now
ရခုိုင်ပဋိပက္ခဒေသကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ သူပုန်ကျောင်းသားဟောင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း စမ်းချောင်းဘိုဘိုနဲ့ ရခိုင်ဒေသရောက် အင်တာဗျူး – Myanmar Now (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ ရန်ကုန်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့၊ စမ်းချောင်းဘိုဘိုလို့ လူသိများတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ ...
မိုးမခမီဒီယာအမည်ဖြင့် သတင်းထောက်များ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ စေလွှတ်ထားခြင်းမရှိ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၇ ယမန်နေ့က ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာအချို့မှာ – ”မောင်တောဒေသအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်နှင့် မိုးမခသတင်းဌာန ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်” ဆိုတဲ့ လုပ်ကြံသတင်း (fake news) ဖြန့်ချိမှုတွေ တွေ့ရှိရပါတယ်။ လက်ရှိ...
Smoke rises as people look on in Meikhtila, March 21, 2013. The central Myanmar town declaredacurfew for...
ဂျူနီယာဝင်း – ဆည်များ၏နေရာ ၂
ဂျူနီယာဝင်း – ဆည်များ၏နေရာ ၂ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၁၅ (Junior Win’s Where Dams Dare II ကုိုကိုယ်တုိုင် ဘာသာပြန်သည်။) မြန်မာပြည်မှာ ဆည်ပေါင်း...
Photo – Irrawaddy, 2015, March, Latpadan Student Protest မောင်ရစ် – အနှစ် အစိတ်ကျော်ကြာလည်း ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်နောက်က လိုက်နေဆဲ (အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်း၊ မေ၊ ၂၀၁၅) ဇွန်...
ကိုရုပ်ဆိုး (AMA) – သောက ပွေတဲ့ – မလေးမြေ
သောက ပွေတဲ့ – မလေးမြေ ကိုရုပ်ဆိုး (AMA)၊ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၄ (ကွာလာလမ်ပူ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးပိုင်(အလောင်းနား၌ အင်္ကျိ လက်ရှည်နှင့် ရပ်နေသူ)ကို မသေဆုံးမီ နာရီပိုင်းအလိုက...
MoeMaKa Reporter 003 – Great Gap between two religion, two community
ဘာသာ ၂ခု ၊ လူမျိုး ၂ ခု ရဲ့ ကြားက ကွာဟချက်တွေ အများကြီးပဲ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ မေ ၂၊ ၂၀၁၃ ဧပြီလကုန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီး...
အနှစ် အစိတ်ကျော်အကြာ မိုင်ပေါင်း ၈ထောင်က ရေးတဲ့ စာ မောင်ရစ်၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၃ အနှစ်၂၀ မျှ တိုင်းပြည် အတွက် လုပ် လာပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပြန်ကြည့်...
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၂၀ – Maung Yit
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၂၀ ပြောင်းပြန် ရေးခြင်း မောင်ရစ်၊ မတ် ၆၊ ၂၀၁၃ ကဗျာဆရာမင်းထက်မောင်ရဲ့ ကဗျာပြောင်းပြန် ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေး ရှိတယ်။ ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း ရေးတာပါ။ အရင်စစ်အစုိုးရလက်ထက်မှာ စာအုပ်မထွက်ခဲ့ပေမယ့်...
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၁၇) လက်ပံတောင်းသပိတ်အလွန် (ဦး)သိန်းစိန်ပြောတဲ့ မြန်မာနွေဦးကာလများ မောင်ရစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုကို လက်ရှိအစုိုးရက အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်မှုတွေ ပြုလိုက်တယ်။ သံဃာတော်တွေဖက်ကလည်း လက်ခံတော်မူတယ် ဆိုတယ်။ သည်တော့...
၂၈ အောက်တိုဘာ – မိုးမခရေဒီယို
၂၈ အောက်တိုဘာ – မိုးမခရေဒီယို အဘိဓမ္မာနေ့ နဲ့ ၀ါကျွတ်ချစ်သူ – နုနုစိန်(ယဉ်ကျေးမှု)နဲ့ ဗညားဟန်၊ စိမ့်နေခြည် သူတော်ကောင်း လက္ခဏာ ၁၂ ပါး – ချမ်းမြေ့အောင်စာ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ...
by Yangon Press International on Monday, 22 October 2012 at 00:37 · ဘာတီးလင့်တ်နာ ဝေမိုးတွေ့မေးသည်။ အစိုးရအတွက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ လက်နက်ချပြီး အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ လက်အောက်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ပဲ။...
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ အတိုအထွာ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၆ မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးနှစ်တကြိမ် ရွေးကောက်တဲ့ သမ္မတနဲ့...
နှင်းမောင်၊ ဟင်္သာတအထောက်တော်၊ သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၁၂ ဇွန်လဆန်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ရခုိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသခံတို့ အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ကြရာ၊ အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များမှာ သောင်းနှင့်ချီပြီး ရှိနေသဖြင့် မြန်မာပြည်သူတို့ကိုယ်တိုင်...
TheGeek – ဒင်းဗား၊ သြရိုရာ ရုပ်ရှင်ရုံ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူထု၏ တုန့်ပြန်ပုံ
ဒင်းဗား၊ သြရိုရာ ရုပ်ရှင်ရုံ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူထု၏ တုန့်ပြန်ပုံ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၉ ၊ ညသန်းကောင်ယံ၊ ရုပ်ရှင်ကားသစ်တခုဖြစ်တဲ့ The Batman, The Dark...